Izintaba nezintaba eziqongweni zaseScottish Highlands
Imisebenzi emazweni aseScottish Highlands
Ibhalwe on 18 October 2009 . Kuthunyelwe ku Imisebenzi
IScotland iyindawo enhle kakhulu yokuhamba ngezintaba, izintaba kanye nedwala Ukukhuphuka, izintaba eziningi zaseScotland zifinyeleleka kalula emgwaqeni womphakathi kodwa ezinye izindawo zeCairngorms, Skye no Knoydart zikude kakhulu.
Bonke abakhuphukayo kufanele baqaphele izingozi ezingenzeka futhi bahlomele kahle.
Ubusika bungabonisa isithombe esihluke ngokuphelele kusukela entwasahlobo nasehlobo, ezinye zezikhungo eziyinhloko ezikhuphuka zihlanganisa i-Arran, i-Skye, i-Ben Nevis, i-Glencoe ne-Cairngorms.
Ukuphakama kwezinga eliphansi kakhulu, okuyizinkulungwane ezine kuphela kwe-4 OOOft, lokhu kungakhohlisa njengoba izinguquko zesimo sezulu esheshayo zibenza zibe yingozi,
I-Highlands esentshonalanga nenyakatho inikeza ezinye izigaba zokunciphisa kanye nezinqwaba, okuthandwa kakhulu, uBens Nevis noLomond, banezinyathelo ezimakwe kahle.
Siyakutshela ukuthi usesikhathini esinolwazi nolwazi olufanele lomsebenzi, I-Scottish Mountaineering Club ishicilela uchungechunge lwezincwadi eziqondiswayo ezikhethekile ezitholakala ezitolo ezikhuphuka nabathengisi bezincwadi ezikhona futhi kunezinhlobo eziningi ze-ejenti ezifanelekile ukwenza isipiliyoni sakho ukuhamba ngezintaba, ukuzintaba kanye nedwala Ukuqhakazila ezindaweni eziphakeme ze-scottish ukujabula nokuphephile
Emnyango wethu uGlen Affric, iNational Nature Reserve, kanye noG Glens Cannich neStrfarfarrar, izindawo ezibuhle obuhle kakhulu, zinikeza ukufinyelela kwamanye amazwe aseScotland nasezindaweni ezikude kakhulu,
izilwane zasendle zitholakala ngaphakathi kwemithombo ye-Caledonian Pine Forest yasendulo, inyamazane ebomvu, ukhozi wegolide, i-badger, i-pine marten, i-otter kanye nezinye eziningi zengeze isipiliyoni somlingo ezindaweni ezizungeze iGlen Affric, ngokuvamile echazwa njenge-glen enhle kakhulu eScotland, lithelela amanye amamayela angu-30 ukusuka eKintail entshonalanga kuya ezinyangeni ezimbalwa ze Cannich eStrathglass.
I-Strathglass ikhona enhliziyweni yezinye izindawo ezihle kakhulu eScotland. Ukusuka eGlen Affric kuya e-Beauly, kuwukuphela kwesikhashana kusuka ku-Inverness inhloko-dolobha yaseScottish Highlands.
I-Cannich, ekhonjwe ngezansi kwemithambeka yaseBeinn e-Chairein, isemgumbini we-glens amathathu: iGlen Cannich, Glen Affric ne-Glenurguhart, ukukhuphuka emzaneni waseCannich ngokusebenzisa izinkuni zemvelo ukuya eGlen Cannich kulandela umfula namanzi ngaphambi kwebala ivula ukutholakala kwemithombo ye-hydro dam encane ngaphansi kweLoch Mullardoch. Leli damu elikhulu kunawo wonke eScotland kanti lesi sakhiwo sinamathela engxenyeni yamamayela, isisekelo esikhulu sekhonkrithi. Ngasentshonalanga amagquma ahlaza futhi ahluma futhi izindawo zokuqothulwa zemizi yakudala zihlakazekile endleleni, izintaba ezimbili ezinhle kunazo zonke e-Highlands, uMam Sodhail noCarn Eighe bahola emagqumeni aseKintail.
Amanzi avela ekushiseni awela phansi ezintabeni ezingasenyakatho yeGlen Shiel nasekupheleni kweBeinn Fhada emifuleni emikhulu emibili i-Allt a Chòmhlain ne-Allt Cam-bàn, ndawonye bahlanganisa ukudala uMfula u-Affric ogeleza nge-lochs ezimbili ezinkulu I-Fasnakyle eStrathglass lapho ihlangana no-Abhainn Deabhag ukwakha i-River Glass.
Ngaphesheya kweStrathglass, emgwaqweni ukuya ePlodda Falls, yindawo yokulondolozwa kukaTomich, engxenyeni engezansi yeStrathglass yilapho edolobheni laseStruy emnyango weGlen Strathfarrar, namuhla iningi lale ndawo endaweni yalo izindawo zokuhlala kanye neStrathlass endaweni eyaziwa ngekhwalithi yokudubula kanye nokudoba i-salmon ne-salmon, ngaphakathi kwe-Glens, kukhona ukuhamba nokukhuphuka ukuze kuhambisane nazo zonke amazinga, ngoba abanolwazi oluncane yilona isingeniso esiphelele sokuhamba ibanga elide, kanye namathrekhi enkuni, sicela uqaphele ukuthi udinga ukuthola ukuthi iziphi izitezi zisesikhathini sokudubula ukuze ugweme noma yiziphi izingozi ngalezi zikhathi, cela ezindaweni zokuvakasha zendawo abangakulekayo.
Kunezigaba ezithile eziyinselele, ngoba abanolwazi oluningi abangafisa ukubhekana nabo futhi bagqoke ama-Munros noma i-Corbetts i-Glen Affric yemvelo yemvelo, kanti futhi iG Glens Cannich neStrathfarrar yiyona ndawo abahamba ngezinyawo nabagibeli, abafanelekile ukuvakashelwa
Bhala ukubuyekeza kokuqala!